Laura | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > လော်ရာသောမတ်စ်
ဥရောပကော်ဖီတစ်ဦးဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိငွေပမာဏကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စားသုံး, ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ကဖေးရှိပါတယ်. ဒါဟာကော်ဖီချစ်သူများမက္ကာနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ပိုပြီးရုံထက်. ကဖေးယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာတွင်မယ့်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့ရှာသည်…
ကြှနျုပျတို့သညျဤသစ်ကိုဆယ်စုနှစ်ထဲသို့မဝင်ရအဖြစ် Eco ဖော်ရွေခရီးသွားကြှနျုပျတို့၏စိတျ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောရောဘတ် Swan နှင့် Greta Thunberg အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ, ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည်လင်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေပါသည်. We are running out of time to…
Florence နေဖို့တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်လုပ်ဖို့တန်ချိန်ရှိပါတယ်. ဒါပေမဲ့, သင်ဤမြို့တော်ကျော်လွန်စွမှရှာဖွေနေလျှင်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ. ဝေးဖလောဆီကပဲရထားစီးဖြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်ကိုမှအချို့သောအံ့သြဖွယ်သောနေရာများရှိပါသည်. ဒီမှာ…
ပဲရစ်အကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့ဤမျှလောက်ရှိပါတယ်. သင်သည်အဘယ်မှာပင်စတင်ကြဘူး, မှန်သော? စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre တူသောအကြီးဆိုဒ်များဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်လည်းတမြို့လုံး၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်? Let us start with…
သင်ကသမိုင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆည်းပူးခဲ့ကြ, အတတ်ပညာ, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကိုယခုမြို့နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်စူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. ကံကောင်းတာက, ဘရပ်ဆဲလ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်အတွင်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်. ဒီတော့သိပ်ဒါ, ငါတို့ဆုံးဖြတ်ပြီ…
သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီဖက်ရှင်မြို့တော်အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ resplendent ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, architecture and beautiful…
အမှုအရာပဲရစ်တွေအများကြီးများအတွက်လူသိများသည်ရှိပါသည်. ဒါပေမယ့်ပဲရစ်လုပ်ဖို့အခမဲ့အမှုအရာသည်လူသိများသည်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးရင်ခုန်စရာသောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြား. ပင်တစ်ဦးကဖက်ရှင်မြို့တော်နဲ့စာပေပရဒိသု!…
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားအားလုံးအချိန်အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်စီးရီးခဲ့ကြသည်. အဆိုပါဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားကနေမြင်ကွင်းများအတော်များများဟာလန်ဒန်သူ့ဟာသူအတွင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြ. သင်ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စာအုပ်စီးရီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲယဉ်းပန်ကာများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, လန်ဒန်ခြောအဆိုပါဖြစ်ပါသည်…
ဥရောပအစိတ်အဆိုတော်နှင့်ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာအနှံ့မှ, ဒါကြောင့်အဲဒါကိုရောနှောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်! ရှာဖွေတွေ့ရှိ5နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဥရောပမှာနေရာများနှင့်ဥရောပနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံအားလပ်ရက်များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးရန်သင့်အားလပ်ရက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများစာအုပ်ဆိုင်…
မီလန်မှရောမမြို့အားဖြင့်ရထားသို့မဟုတ်ရောမမြို့မှမီလန်အနေနဲ့လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုအတွေ့အကြုံ. မပြောလှ! သင်ဟာဒီထက်ပိုပြီးကြာနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ရထားကိုသင်စီးနိုင်ပါတယ်3hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…